China Ejiri Lightbox Shoebox China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ejiri Lightbox Shoebox - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ejiri Lightbox Shoebox)
Echiche M - Anyị Bbier 150 Watt Led Na-adọba ụgbọala Lens jiri SMD 3030 LED modules nke na-emepụta ruo 130 Lumens per watt ma nọgide na-enwe mmeri 90% karịa ihe karịrị 36K awa. Nke a Led Car Lot Lot Light Fixtures na -eji ọkwa ọkwa ọkwa nkịtị. Ụlọ elu dị elu na-eme ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe a N'èzí na-echekwa ụgbọala...
DLC 320W Ruru Ogwe Mpempe akwụkwọ Lotbox
Ejiri Lightbox Shoebox abia na obosara ohuru ohuru nke obosara ogwe aka na ihe ndi ozo. Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 300W iji dabara na mkpanaka okirikiri na ntụpọ, na ntụgharị ntụziaka ndị ọzọ. Ugbo ala na-adọkpụ ụgbọala na-adọba ụgbọala nwere ike iji dochie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1000W metal halides (MH) /...
300W Led Shoebox Street Light Fixture Photocell Sensor
Ejiji anyị 300W na-ere maka ire ere bụ 130lm / w na 39000lm na 300W Led Street Light Fit nwere ike dochie HPS / HID 10 00 watt . Led Street Light NZ bụ Ụdị 3M na IP65. Nke a mere ka ìhè n'okporo ámá vs sodium bụ ihe nkedo enyo na ngọngọ PC. Ejiri okporo ámá anyị na- eduzi ọdịnala na-asọmpi na EC ROHS ETL DLC...
100W Ejiri Nlekọta Ịgba Ọhụụ Maka Ụlọ Ọrụ
Nke a dị 100 Watt 2ft Led Linear Pendant bụ ike mgbanaka dị ike maka ọdịdị ọdịdị ọdịdị ọdịnala ọdịnala na ọkụ ọkụ dị na HID. Led Linear Light Fixtures emepụtala 13,000 lumens iji 100 watts. Ebube Ntanetị Led Line maka ngwa gụnyere: ụlọ nkwakọba ihe, mgbatị, ụlọ ọrụ na ọtụtụ ngwa oru. Ejiri ntanetị anyị dịkwa mma maka...
30W Ejiri Akara N'ihu Oge Nlekọta
Bbier 30W Ejiri Agbanwe Ugboro Oge Ayi Ngwado nwere nnukwu ihe na-egbuke egbuke nke dị ogo 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a na-emepụta oge a na-arụ ọrụ na ntanetị nke ọma maka oge 50000 nke ndụ. Nke a 30W Led Modern Post Top kwesịrị DO 2-3 / 8 anụ ọhịa na 3 anụ ọhịa pole mfe iji wụnye ọkụ ụgbọala, ọkụ...
150W Ejiri ọdụ ụgbọ elu ọkụ ọkụ
Ụlọ ọrụ gas anyị na- eme ka ọkụ ọkụ na- eji mma iṅomi 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide mgbochi dị elu ma kesaa ìhè. Nke a Led Petrol Station Lighting na- eji ọkwọ ụgbọala dị elu, nke na-egosi CE ROHS abd afọ atọ. Egwuregwu ndị a na- eji ọkụ na- eme ka anyị nwee ike iji nkà na ụzụ ọhụrụ, nke na-erughị 3%...
Ejiri Lightbox Shoebox Led Street Light Shoebox Ejiri Ìhè Mmiri Shoebox Ejiri Udo Light Kit Ejiri Shoebox Light 300W Ejiri Ufo Light Fitit Uwe ihu igwe na Shoebox 300W Led Shoebox